नख्खु कारागारमा २६० कैदीबन्दी मानसिक रोगी – उजेली न्यूज
प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७७, शुक्रबार १२:०१
ललितपुर । नख्खु कारागारका २६० कैदीबन्दी मानसिक रोगी छन् । सामान्यदेखि जटिल मानसिक रोगका कैदीबन्दीलाई आवश्यक उपचार सेवा दिने गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारमा हाल एक हजार ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये २६० जनामा मानसिक समस्या देखिएको कार्यालय प्रमुख मोहन अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै कारागारको बहिरङ्ग सेवामा दैनिक तीन चिकित्सकले लगभग ३० देखि ४० कैदीबन्दीलाई उपचार सेवा दिने गरेका बताइएको छ । नख्खु कारागारका एक हजार २९७ कैदीबन्दी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई कोरोनाको खोप दिइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले बताए ।
Previous: ६१ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन, हेर्नुहोस कसको सरूवा कहाँ भयो ?
Next: ओली समूहको जनसभामा क–कसले गर्दैछन् सम्बोधन ?